Nin qarax ka gaystay Ingiriiska oo haweeneydiisa la sheegay inay ka tirsan tahay Shabaab
Nin qaraxyo ka gaystay wadanka Ingiriiska ayaa waxaa la ogaaday xaaskiida inay ka tirsan tahay Al Shabaab oo ay u qaabilsan tahay tababarka haweenka.
Sida ku qoran warbixin maanta lagu daabacay wargeyska The Daily Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska Hayada sirdoonka dalkaasi Ingiriiska ee la yiraahdo MI5 iyo booliska adduunka ee Interpool ayaa ka war helay in haweeney u dhaxday nin sanadkii 2007 qaraxyo ka geystay magaalada London ee xarunta Ingiriiska oo lagu magacaabi jiray JermaLindsay ay ku sugan tahay qeybo ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya islamarkaana ay tababaro siiso haweenka Soomaalida ah ee ka tirsan Xarakada Al- Shabaab oo Soomaaliya ka dagaalama.
Haweenaydaan oo lagu magacaabo Lewthwaite hase ahaatee Shabaab dhexdiiisa loo yaqaan magaca Dada Mzungu oo la macnno ah Gabadha walaasheen ah ee cad, ayaa markii uu ninkeeda qaraxyo ka geestay dalka Ingiriiska, waxaa ay u socdaashay dalka Kenya gaar ahaan magalada xeebta ku taala ee Mombasa ooo ay Hayadaha amaanka Ingiriisku sheegeen inay ku sugneyd.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in markii ay gashay dalka Kenya in booliska Kenya ay ka war heleen oo lagu war galiyay inay soo qabtaan haweenaydaasi hase ahaatee waa ay ka baxsatay waxaana gurigii ay daganeyd laga helay waxyaabo qarxa oo laga sameeyay waxyaabo Kiimikaal ah sida Booliska Kenya ay sheegeen .
Bishii December ee sanadkii la soo dhaafay ayaa booliska adduunka Interpool iyo Hayadda sirdoonka dalka Ingiriiska ee MI5 waxa ay ogaadeen xog ku saabsan in haweenaydaasi ay abaabulayso qaraxyo ka dhaca dalka Kenya gaar ahaana magaalada Mombasa.
Qaraxyada ayaa haweenaydaani waxaa la sheegay inay gacanteyda ku samayso waxaana wargayska warbixintaan qoray ee The daily Telegraph uu leeyahay nasiib darro booliska Kenya waxa ay ku guul dareysteen soo qabashada Lewthwaite .
Sarkaal ka tirsan booliska Kenya oo ku sugan magaalada Mombasa ayaa wargeyska daily Telegraph u xaqiijiyay in Lewthwaite ay ka gudubtay xadka Kenya, isagoo sheegay .inay hadda ku sugan tahay meel ka mid ah gobolada koonfurta Soomaaliya ku yaala oo ay tababaro siiso haweenka u dagaalama Al-Shabaab.
Qoraallo ku aadan baraarujin dhanka jihaadka oo ay haweenaydani u dirtay haween kale oo ku sugan dalka Tanzania ayaa muujinaya inay ku sugan tahay dalka Soomaaliya , waxana arintaasi caddeenaysa ayuu leeyahay wargeyska inay isticmaalayso isgaarsiinta dalka Soomaaliya lagana ogaaday furaha Soomaaliya oo ah +252..
Qoraalada ay qortay islamarkaana ay soo heleen booliska adduunka ee Interpool la yiraahdo iyo Hayadda soonka Ingiriiska ayaa dhamaantood waxa ay ahaayeen kuwo ay ku baraarujineyso haweenka aan Muslimiinta aheyn , iyadoo ugu baaqaysa
 Inta aadan ku halaagsamin adduunyada waad inaad noqotaan haween u gar gaara ilaaheey oo diinta difaaca .
Lewthwaite ayaa wargeysku waxa uu leeyahay yaraanteeda waxa ay jeclayd inay noqoto gabar Mujaahidad ah iyadoo jecleyd in maalin maalmaha ka mid ah ay u gar gaarto diinta Alle sida warbixinta lagu qoray.
In ka badan 5 jeer ayaa la aaminsan yahayinay ka bad baaday isku day la doonayay in lagu qabto.
Saaxiibadeed ayaa weydiiyay waxa uu yahay Jihaadka , waxana ay ugu jawaabtay in jihaadka uu garanayo cidda ku dhex jirta , hadii aad doonaysaan inaad fahantaan mecnaha jihaadka imaada Soomaaliya oo kaalmeeya walaalihiina u gar gaaraya diinta ee dagaalada ka wada Soomaaliya ayay ugu jawaabtay saaxiibadeed sida uu ku waramayo wargeyska.
Si kastaba waxaa haatan la rumaysan yahay in Lewthwaite oo ah xaaska ninkii ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay magaalada London Ingiriiska iyadoo isticmaalaysa magaca ah Dada Mzungu ay ku sugan tahay Soomaaliya islamarkaana ay tahay sarkaalad tababarta haweenka Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee aan Soomaalida aheyn ee Xarakadda Al-Shababka kala qeyb qaata dagaalada ka dhanka ah dowladda KMG Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Xarakadda Al-Shabaab ayaa xiriir wanaagsan la leh ururka Al-Qacida dad badan oo aan Soomaali aheyn ayaa la aaminsan yahay inay ku garab siiyaan dagaalada ay Soomaaliya ka wadaan.
Qaraxyo Soomaaliya ka dhacay oo Shababku m,asuuliyadooda ay sheegteen ayaa la sheegaa inay fuliyeen haween waxaana ugu dambeeyay qaraxii 4,tii bishii April ka dhacay xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre oo ay dad badan ku waxyeeloobeen.